Qiima dhimistaan ​​ku samee taleefannada casriga ah Light in the Box | Androidsis
Ka faa'iideyso qiimo dhimista taleefannada gacanta ee Light in the Box
Eder Ferreno | | Mobiles
Markaad diyaarinayso hadiyadaha kirismaska, iibsashada taleefannada casriga ah waxaa loo iibsaday wax caadeystay. Hadiyad wanaagsan oo qofka kale hubaal aad ugu farxi doono. Iftiin ku jira sanduuqa taas xisaabta ayey ku darsataa waxayna noo keenayaan a xulashada taleefannada casriga ah. Xullo taleefano oo ka socda noocyada shirkadaha waaweyn.
Sida inbadan oo idinka mid ahi ogyihiin, Iftiinka Sanduuqa waa mid ka mid ah dukaamada ku habboon in laga iibsado aaladaha Aasiya. Tani waa waxa aan heli karno maanta. Waa maxay telefoonada iibka ah ee aan heli karno maanta?
Fursad fiican haddii aad taleefan ka raadineysay noocyada Aasiya sida Xiaomi, OnePlus ama Lenovo. Iftiinka Sanduuqa ayaa noo keenaya xulashadan weyn ee qalabka la bixiyo. In kasta oo ay tahay inaan deg degno haddii mid ka mid ah dalabyadan ay xiiseynayaan, maxaa yeelay waa cutubyo kooban. Waxaad ka arki kartaa telefoonada la soo bandhigey xidhiidhkan.
Kadib waxaan ku tusaynaa qaar ka mid ah taleefannada ugu fiican in aan ka heli karno dhiirrigelintan dukaanka caanka ah. Telefoonadee ayaa nagu sugaya dalabkan?
2 Xiaomi Redmi Xusuusin 4 - 115.65 / 138,3 euro
3 Xiaomi Redmi A4 - 67,8 euro
4 LeTV LeEco Le Max2 X820 - 116,14 euro
5 Lenovo ZUK Z1 221 - 105,79 yuuro
Mid ka mid ah telefoonada ugu fiican sanadka taas oo dhawaan suuqa gashay. Qalabka OnePlus wuxuu isbeddel muuqda ku ahaa shirkadda. Badiyaa qaabkeeda, tan tan OnePlus 5T wuxuu soo bandhigayaa shaashad bilaa qaab ah oo leh 18: 9 ratio. Sidan oo kale waxay ku biirtay mid ka mid ah isbeddellada waaweyn ee sanadkan ka jira suuqa. Qalab tayo leh oo wax badan ballan qaada.
hay laba nooc oo qalab ah oo laga heli karo Iftiinka Sanduuqa, 64 GB keyd ah iyo 128 GB keyd ah. Nooca OnePlus 5T oo leh 64 GB oo keyd ah ayaa lagu heli karaa qiimo ah 415,38 euros.
Dhinaca kale, waxaan sidoo kale haysannaa kuwa 128GB nooca keydinta ee OnePlus 5T ee ku xayeysiinta ah Iftiinka Sanduuqa ee qiimaha 474,76 euros.
Xiaomi Redmi Xusuusin 4 - 115.65 / 138,3 euro
Qalab kale oo lagu heli karo laba nooc waa kan Redmi Note 4. Leh a 5,5 inch screen. Sida processor waxay leedahay Snapdragon 625 gudaha. Halka ay leedahay kamarad 13 MP ah. Waxaa jira laba isku dhafan oo qalabka ah. Mid leh 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB kaydinta Midda kale oo leh 3 GB oo RAM ah iyo 32 GB oo keyd ah.
La nooca oo leh 3 GB oo RAM ah iyo 32 GB kaydinta waxaa lagu heli karaa qiimo ah 115,65 euros Iftiinka Sanduuqa.
Nooca kale ee laga heli karo dhiirrigelinta ayaa ah midkaas wuxuu leeyahay 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah gudaha ah Lagu heli karo qiimo ah 138,3 euros. Ha u oggolaan inay baxsato!
Xiaomi Redmi A4 - 67,8 euro
Waa qalab fudud laakiin si fiican ayuu u shaqeeyaa. Waxay leedahay a 5 inch screen. Gudaha waxaan ka helnaa a Processor Snapdragon 425. Sidoo kale 2 GB oo RAM ah iyo 16 GB oo keyd ah oo gudaha ah. Sidoo kale leh a 3.120 mAh baytariga, taas oo siinaysa ismaamul weyn. Marka waa taleefan aan la fahmi karin laakiin si fiican ayuu u shaqeeyaa.
Iftiinka Sanduuqa ayaa noo keenaya qalabkan qiime aad u sarreeya de 67,8 euros. In kastoo, haddii aad xiisaynayso, ay muhiim tahay inaad soonto, maadaama ay jiraan cutubyo kooban.
LeTV LeEco Le Max2 X820 - 116,14 euro
Summad kale oo aan dhowr jeer kaaga wada hadalnay. Qalab leh a 5,7 inch screen. Processor ayaa nagu sugaya gudaha Snapdragon 820, taas oo siinaysa awood weyn iyo tamar isku dheelitiran. Ka sokow haysashada 4 GB oo RAM ah iyo 32 GB oo keyd ah. Waxaan sidoo kale leenahay a 3.100 mAh baytariga.
Este qalab ayaa laga heli karaa Iftiinkan ku jira xayeysiinta sanduuqa qiime ahaan 116,14 euros. Qiimo fiican taleefan aad u dhameystiran.
Lenovo ZUK Z1 221 - 105,79 yuuro
In kasta oo laga wada yaqaan dhammaanba kumbuyuutarradeeda gacanta, haddana Lenovo sidoo kale wuxuu sameeyaa taleefannada casriga ah oo aad u xiiso badan. Qaabkani wuxuu leeyahay a 5,5 inch screen. Gudaha gudaheeda waxay ku leedahay 3 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah. Waxa intaa dheer a Processor Snapdragon 801. Waxa intaa dheer a 4.100 mAh baytariga. Markaa waxay leedahay is-maamul-weyn, ku habboon haddii aan taleefanka aad u badan adeegsanno.
Iftiinka Sanduuqa ayaa noo keenaya qalabkan qiime ahaan 105,79 euros. Fursad wanaagsan haddii aad raadineysay moodel astaamahan leh.
Kuwani waa qaar ka mid ah dalabyada ku baxa taleefannada casriga ah ee aan ka helno Iftiinka Sanduuqa. Haddii aad raadineyso taleefan casri ah oo aad bixiso, ama aad cusboonaysiiso taada, ha seegin dhiirrigelintan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Ka faa'iideyso qiimo dhimista taleefannada gacanta ee Light in the Box
Faahfaahinta cusub ee Huawei Enjoy 7S waa la sifeeyey